‘झोले’ फार्मेसीलाई बीमा औषधीको आपूर्ति ठेक्का « AayoMail
झापा – संचालनमा नै नरहेका झोले फार्मेसीको नाममा फर्जी कागजात बनाएर बीमाको औषधी आपूर्तिका लागि नगरपालिकाका कर्मचारीले टेण्डर पारेको खुलासा भएको छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका कर्मचारीले कालीमाँ फार्मेसीका नाममा त्यस्तो चलखेल गरेको रहस्य खुलेको हो।
सो नामको फार्मेसी बिर्तामोडमा कहीँ पनि छैन। बिर्तामोड नगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन ओम खड्काले दर्ता गरेर राकेको कालीमाँ फार्मेसीलाई टेण्डर पारेको दाबीसहित स्थानीय युवा त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेर गलत गतिविधि सच्याउन माग गरेका छन्।
सो कार्यमा फोकलपर्सन खड्का, नगरपालिकाका अधिकृत देवराज कार्की संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ। अधिकृत कार्की खड्काका व्यवसायिक साझेदार हुन्। खड्का र कार्कीको मिलेमतोमा सार्वजनिक सूचना नै ननिकाली अनाधिकृत काम भएको स्रोत बताउँछ। उनीहरूले खेम बस्नेतको नाममा टेन्डर परेको कागजात बनाएको बिर्तामोड-४ का एक युवाले आयोमेललाई बताए।
बस्नेत खड्काको फार्मेसीका कामदार हुन्। उनले मासिक तलब बुझ्ने गरेको ती युवाले दाबी गरे। कालीमाँ फार्मेसी बस्नेतको नाममा दर्ता छ। नाताले बस्नेत खड्काको सालो पर्छन्। खड्काले बिर्तामोडको अदुवाखोला नजिक एउटा फार्मेसी चलाएर चार/पाँचवटा फार्मेसी झोलामा राखेको स्रोत बताउँछ।
‘अधिकृत कार्की र फोकलपर्सन खड्काले पहुँचका आधारमा गरेको यो अवैध काम हो’, ती युवाले आयोमेललाई भने, ‘बीमाबापतको औषधी वितरण कार्यक्रम सुरु नहुँदै यस्तो बेइमानी गरिन्छ पछि के होला? नगरपालिकाले बीमा बापतको औषधी सेवाग्राहीलाई देला भनेर कसरी विश्वास गर्ने?’
बिर्तामोड नगरपालिकाले मनोमानी ढङ्गबाट मोटो रकम कमिसन लिएर सेटिङ्गमा काम गरेको स्थानीय युवाको दाबी छ।
बिर्तामोड नगर अस्पतालमा बीमाबापतको औषधी आपूर्तिका लागि कुनै पनि सूचना प्रकाशन र प्रशारण गरिएको छैन। तर, कालीमाँ फार्मेसीलाई टेण्डर पारेको छ। ३६ लाख ६० हजारमा टेण्डर परेको नगरका कर्मचारीको भनाई छ। स्थानीय पत्रपत्रिका तथा सूचना पाटीमासमेत सूचना टाँस नगरी आर्थिक लेनदेनमा भित्रभित्रै टेण्डर मिलाइएको हो। यस्तो टेण्डर आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै स्थानीय सरोकारवाला विरोधमा उत्रेका छन्।
१३ जना युवाले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाकेर टेण्डर तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले तुरुन्त टेण्डर खारेज नगरे त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कालो मोसो दलेर बजार घुमाउने चेतावनी दिएका छन्। सूचना पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउँदै गरिएका यस्ताखाले गतिविधि नगरपालिकाका अधिकृत स्तरका कर्मचारीबाट नै हुने गरेको स्थानीय युवा आकास उप्रेतीले बताए। उनले यो विषमा आफूहरु चुप लागेर नबस्नेसमेत बताए। नगरपालिकामा जानकारी गराउनै पर्ने व्यक्तिहरुलाईसमेत यो विषयमा थाहा नहुनु षड्यन्त्र भएको आन्दोलित युवाको भनाइ छ।
जारी विज्ञप्तिमा आकास उप्रेती, कैलाश प्रसाईं, गौरब उप्रेती, ज्ञानेन्द्र खरेल, नवराज चिमरिया, प्रकास उप्रेती, गोपाल बुढाथोकी, सुरज सुनुवार, सन्तोष पाठक, अर्जुन शर्मा, किगंता कार्की, चन्द्रा खरेल, पासाङ शेर्पाले लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नगरपालिकामा पहिलोपटक बीमा औषधी कार्यक्रम लागू हुन लाग्दा नगरपालिकाकै कर्मचारी बेइमानी गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार सिवाकोटीले सुनले भाइरस तान्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेकै बेला नगरपालिकाका कर्मचारीको यो कर्म सार्वजनिक भएको हो।
अधिकृत कार्कीले फेसबुक के लेखे?
बिर्तामोडको नगर अस्पतालमा २०७८ जेठ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको भनेर १९ गते नगरपालिकाका एकजना अधिकृतले देवराज कार्कीले औषधीको सेवा सुरु भएको भनेर लेखेका थिए। तर, अहिलेसम्म सेवा सुरु भएको छैन। नागरिकले सेवा नपाएको विषयमा भ्रमपूर्ण स्टाटस आफ्नो फेसबुकमा लेखेको भनेर उनको आलोचना भइरहेको छ। अधिकृत कार्कीको फेसबुक स्टाटस हेरेर बीमाको औषधी लिन बिर्तामोड नगर अस्पताल पुगेका सेवाग्राही त्यसै फर्किन बाध्य भएपछि यो खोजीको विषय बनेको थियो। टेण्डर स्वीकृत र सम्झौता नै नभई नगर प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई दबाब दिन अधिकृत कार्कीले सो स्टाटस लेखेको चर्चा छ।
यसो भन्छन् अस्पतालका डाक्टर
‘भ्रामक स्टाटसले सेवाग्राही रित्तो हात फर्कन बाध्य भएका हुन्। अस्पतालले यो काम गर्ने स्वीकृति भर्खर मात्रै पाएको हो’, नगर अस्पतालका डा. फर्हान सिद्दिकीले भने, ‘बीमाको औषधी अहिले पाउने अवस्था नै होइन।’
अस्पतालले सरकारले तोकेका ७० प्रकारका औषधी पहिलेदेखि दिँदै आएको र बीमाको औषधी वितरण कार्यक्रम लागू नभएको उनले बताए। ‘मैले पनि उहाँको फेसबुक स्टाटस त हेरेँ तर, औषधी वितरण सुरु भएको छैन’, उनले भने, ‘बीमाबाट प्राप्त हुने औषधी सुविधाको लागि काम भइरहेको छ।’
आइटी अधिकृतको तर्क
बीमाबापतको औषधीका लागि टेण्डर खोलिएको थियो। अहिले प्राविधिक काम हुँदै गरेको बिर्तामोड नगरका आइटी अधिकृत जयराम चौलागाईंले बताए। ‘हामीले प्राविधिक काम गरेका छौँ तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हेर्न नै बाँकी छ’, उनले भने, ‘उहाँले नहेरी कसरी काम अगाडि बढ्छ र’
आइटी अधिकृत चौलागाईंले बीमाको औषधी खरिदका लागि गरिएको टेण्डरमा कालीमाँ फार्मेसीले ३६ लाख ६० हजार रुपैयाँको कबोल गरेको बताए। तर, त्यो टेण्डरका बारेमा अहिले विवाद भएको छ। उनले टेण्डर परेकामध्ये सो रकम अधिक भएको बताए।
राप्रपा नगर अध्यक्षको माग
राप्रपा नेपाल बिर्तामोड नगर समिति अध्यक्ष रञ्जु प्याकुरेलले नगरपालिकालाई सो विषय स्पष्ट पार्न नगर प्रमुख शिवाकोटीसँग माग गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘बिर्तामोड नगर अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरु भएको भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न संचार माध्यम र नागरिक स्तरबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा उजागर भइरहेको अवस्थामा सो विषयको सत्य तथ्य बुझी वास्तविकताको उजागर गरी नगरबासीलाई सुसुचित गराइदिनु हुन बिर्तामोड नगर प्रमुखज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’